चोरको समूहले प्रहरी प्रमुखलाई नै बन्धक बनाएपछि…. | Rajmarga
युक्रेनमा चोरहरुको समूहले एक प्रहरी अधिकारीलाई बन्धक बनाएका छन् । युक्रेनको पोल्तावा शहरस्थित अपराध शाखाका प्रमुखलाई उनीहरुले बन्धक बनाएका हुन् । प्रहरीको टोलीले उनीहरुलाई कार चोरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । तर उल्टै चोरले प्रहरी प्रमुखलाई बन्धक बनाइदिए । यद्यपि उनीहरु अफिसरलाई छाडेर जंगलतिर भागेका थिए ।
अचम्मको कुरा त यो छकि यसभन्दा अघि पनि त्यहाँ एकजना कनिष्ठ प्रहरी अफिसरलाई चोरहरुले नै बन्धक बनाएका थिए । उनलाई छुटाउने कोसिसमा लाग्दा अपराध शाखा प्रमुख नै उनीहरुको बन्धक हुन पुगे ।
त्यसबीचमा चोरहरुले चोरिएका गाडी मागेका थिए । शाखा प्रमुख गाडी दिन राजी भएपछि उनीहरुले उनलाई छाडिदिए । चोरहरु सोही गाडी लिएर प्रहरी प्रमुखसँगै भागेका थिए । तर उनीहरु प्रहरी प्रमुखलाई बीच बाटोमै छाडेर बाक्लो जंगलतिर भागेका थिए । ग्रिनेडसहित प्रहरी प्रमुखलाई बन्धक बनाएका उनीहरुले आफुले गरेको माग सम्बोधन भएपछि प्रहरी अधिकारीलाई छाडिदिएको बताएका थिए ।
यो घटना हुनु २ दिनअघि युक्रेनमै एक युवकले बसमा सवार १३ जनालाई बन्धक बनाएका थिए । हतियार र विष्फोटक पदार्थसहित उपस्थित भएका उनीसँग प्रहरीले १२ घण्टाको छलफपछि बन्धकहरुलाई मुक्त गर्न सफल भएका थिए । एजेन्सी
Previous post: थाहा पाइराख्नुस आज शुक्रबारको राशिफलमा यस्तो छ तपाईको भाग्य
Next post: २२ वर्षीया युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
कुकरमा अड्कियो बच्चाको टाउको, डक्टर फेल भए अन्तिममा यसरी निकालियो
हजुरआमालाई अदालतको आदेश– फेसबुकबाट नातिनातिनाका फोटा हटाउनू
अब श्रीमतीहरुले ‘सेक्स’अघि वकिल राखेर करारनामा गर्ने दिन आउने
धेरै सुन्दर देखिएका कारण तलब काटिएपछि….(भिडियोसहित)
८५ वर्षको उमेरमा बेश्या बन्ने रहर जागेपछि….प्रेम र सेक्सका बारेमा यस्तो रहेछ सोचाइ
२५ रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ गर्लफ्रेण्ड,मान्नुपर्छ मात्रै एउटा शर्त
पहिलो हेराइमा पुरुषहरुले महिलाको याद राख्ने ५ कुरा
१३ लाख देखि ४० करोडसम्म, यसरी भयो युवतीहरुको कुमारित्वको लिलामी